1.Chii chinonzi Testosterone phenylpropionate? Chinoshanda sei?
Testosterone ndiyo yechirume mahormone inoitika neakasikwa mumuviri wemunhu. Iyo mahormoni inonyanya kugadzirwa muvarume nema testicles. Hormoni iyi inoita basa rakakosha mukuvandudza kutaridzika kwemurume pamwe nezviitiko zvebonde. Mavara eVarume, akadai svimapfupa, mhasuru, kugadzirwa kwemurume, uye kutyaira kwemurume, zvese zvinokurudzirwa ne testosterone. Nekudaro, testosterone kugadzirwa kunodzikira zera rimwe chete. Kune rimwe divi, testosterone ndeye anabolic steroid iyo yakaiswa mukati memuviri kubatsira mukuvaka mhasuru nekuvandudza humwe hunhu hwechirume. Chero ani zvake anotambura kubva pasi yakaderera testosterone mazinga anorayirwa zvakare kutora testosterone kubatsira mukuvandudza kugadzirwa kweyemukati mahormone mumuviri.
Testosterone phenylpropionate (1255-49-8) iri anabolic steroid iyo inoshandiswa nevanhu vanotambura nemhedzisiro yeakadzika testosterone mazinga. Kushaikwa kwakakwana kwe testosterone mumuviri kunogona kukonzera kumatambudziko akasiyana ehutano akadai seyakaderera libido, yakaderera sperm mazinga, uye inogona kunonoka kuvandudzwa kwehunhu hwechirume senge izwi rakadzika, ndebvu, kana tsandanyama panguva yekuyaruka. Kana iwe uchitsvaga mushonga uyo uchakubatsira iwe mukuvaka mhasuru pamwe nekuzadzisa zvinangwa zvako semutambi, ipapo testosterone phenylpropionate ndiyo ichave yekuwedzera yakanyanya. Iyi anabolic steroid inopa mhedzisiro yemhando yepamusoro chero bedzi iwe uchitevedzera iyo yekuraira maitiro.
Kazhinji, vagadziri ve testosterone vanobatanidza mushonga newakasiyana maestri kuti vakwanise kuramba vachishanda mumuviri kwenguva yakareba. Phenylpropionate ndeimwe yevakajairwa esters iyo inonamatira kune testosterone yekuwedzera hupenyu hweiyo mishonga inoshanda kusvika kunguva ye4 kusvika kumazuva e5. Vavaki vemuviri uye vatambi vari pakati pevanonyanya kushandisa testosterone phenylpropionate vashandisi munyika. Mushonga uyu unovabetsera kuwedzera simba remuviri, kuvaka mapundu, uye zvakare kunatsiridza zvepabonde kutyaira. Nekudaro, sekufanana kana uchishandisa mamwe maSteroid, zvinokurudzirwa kuti ugare uchienda kunovhenekwa kurapwa usati watanga kutora mushonga uyu. Testosterone phenylpropionate inoshandisa inogona kusiyana kubva kune mumwe munhu kuenda kune mumwe.
Testosterone phenylpropionate inoshanda sei?
Testosterone phenylpropionate (1255-49-8) kungofanana nemamwe anabolic steroid inosimudzira muviri wako kuti iwedzere testosterone mahormone. Mushonga unovimbisa kuti muviri wako une zvakakwana uye zvakatsiga mazinga e testosterone mahormone. Kamwe izvi zviyero zvehorona zvechirume zvaringana mumuviri wako system, unobva watanga kunakidzwa nezvakanaka, uye unogona kuwana zvirinani basa rako. Iyo mahormoni zvakare ine basa rekusimudzira kurasikirwa kwemafuta, kuchengetedza tsandanyama, uye kukuchengetedza kubva kuOsteoporosis.
Kune chero anovaka muviri, mhasuru dzakasendama uye kusimba kwemuviri kwakakosha kuti uite zviri nani mukudzidziswa uye kukwikwidza. Testosterone testosterone inobatsira zvakare mukupora kwemashure mushure mekurema kwakawandisa zvakanyanya panguva yekuwanda kwemijenya. Aya mahormone anosunga kuAndrogen Receptors (AR) kukurumidza kurasikirwa kwemafuta uye kukura kwemasumbu pamwe nekugadziriswa. Nekudaro, kuitira zvirinani testosterone phenylpropionate mhedzisiro, iwe unofanirwa kuenda nemupimo nekudya kwakakodzera uye kudzidziswa. Dzidzisa wako anodzidzisa uye wezvehutano kana iwe uchitanga kutora testosterone phenylpropionate dosage. Bata chiremba wako nekukurumidza kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchikuvadza mimwe miganho kuti udzivise zvimwe hutano hwehutano.
2.Testosterone phenylpropionate kutenderera
Testosterone phenylpropionate inofanirwa kutumirwa kweanenge 6 kusvika kumavhiki e8, zvichienderana nezvaunoda kuzadzisa nekuguma kwechitenderera. Chiremba wako anozogadzirawo akanakisa Testosterone phenylpropionate kutenderera kwauri mushure mekuongorora mamiriro ako ekurapa. Dzimwe nguva chiremba anogona kusimbisa nguva yekuyerwa kana kuidzikisa. Kuongororwa kwekurapa nguva dzose kuchave kwakakosha kuti utarise maitiro ekurapa panguva yekutenderera. Testosterone phenylpropionate inogona kushandiswa yega panguva yekutenderera kana nemamwe maanabolic steroid kuti uwane zvirinani. Nekudaro, usabatanidza mishonga yacho pasina kubvunza nemushonga wako.
Makambani anorayirwa kuti atange nemadhosi akadzika uye akapfupika masekondi, ayo anogona kugadziriswa gare gare kuti uwane mibairo iri nani. Yepamberi ye testosterone phenylpropionate vashandisi vanogona kunamatira kune yakanyanya nguva yevhiki dze8 kana zvimwe. Usatapudza kana kuwedzera testosterone phenylpropionate kutenderera, kana chiremba asina kukurayira kudaro. Dzimwe nguva mhedzisiro dzinogona kumisa kutenderera pakati kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uine hutano. Miviri yevanhu inoita zvakasiyana neiyo dzakasiyana-siyana zvinodhaka; saka, hazvisi otomatiki kuti mushonga uchakushandira iwe sezvaunoda.
3.Testosterone phenylpropionate mhedzisiro
Testosterone phenylpropionate (1255-49-8), kana ikashandiswa nenzira kwayo, inopa mhedzisiro inobatsira uye pakupedzisira ichakubatsira kuzadzisa zvinangwa zvako. Nekudaro, iyo chaiyo dosage, yekudya, uye yekusevenza inokuvimbisa iwe yemhando mhedzisiro. Heano mamwe eakajairika testosterone phenylpropionate mhedzisiro;
Kukura kwemhasuru, chimwe chezvikonzero nei uchifanira kutanga kutora Testosterone phenylpropionate semuvaka muviri nekuti inobatsira mukuwedzera muswe. Misumbu inoita basa rakakosha muhupenyu hwemuvaka muviri uye kuti uite kuti iwe unofanirwa kutora iyo yakakora maseruids kukwidziridza tsandanyama. Wese anovaka muviri kana mutambi anoshuvira kuve neanonda tsandanyama, ayo anogona kuwanikwa nekutora uyu mushonga unorapa.
Kupisa mafuta, mitsetse yekucheka yakakoshawo sezvo ivo vachibatsira mukubvisa mafuta akawandisa mumuviri. Testosterone phenylpropionate chinhu chakasimba chekucheka chakawedzerwa sezvo chinowedzera metabolism, inotungamira kupisa nekukurumidza kwemafuta emuviri. Unogona kushandisa mushonga wacho wega kana pamwe chete nemamwe maanabolic steroid ayo anoomesa nzira yekupisa mafuta.
Kurumidza kupora mhasuru nekugadziriswa, maekisesaizi anogona nguva zhinji akatambanudza tsandanyama dzako nekuda kwekusimudza zviyero ejimini. Marwadzo aunowana mushure meizvozvo anogona kutadzisa kudzidziswa kwako uye dzimwe nguva anogona kuzviita zvakaoma kuti iwe uenderere mberi neitiro. Nekudaro, kana uchitora testosterone phenylpropionate, izvo zvinofanirwa kunge zvisiri zvishoma nezvematambudziko ako nekuti mushonga wacho unowedzera masisitimu ekurapa. Tsandanyama dzako dzinozogara dzakapora nekukurumidza kuti dzikubvumidze kushanda zuva rega rega uye zviite nyore kwauri kuti uwane yako yaunoda mhinduro.
Inowedzera simba rose remuviri, kushaiwa simba rakakwana kuti ushande uye kukwikwidza zvine hungwaru idambudziko rakakura rinosangana nevazhinji vavaki vemuviri mumutsetse webasa ravo. Testosterone phenylpropionate inowedzera masimba ako emagetsi kukubvumira kudzidzira kwemaawa mazhinji uye kuzadzisa zvinangwa zvako nekukurumidza.
Kusimbiswa kweiyo pfupa system, osteoporosis idambudziko rakatarisana nevanhu vazhinji, uye uyu mushonga unobatsira mukurwisa chirwere ichi chemapfupa. Testosterone phenylpropionate ichagadzirisa hutano hwepfupa rako. Kwemakore mazhinji ikozvino, veMedic vange vachishandisa mushonga uyu kubatsira varwere vemapfupa. Zvidzidzo zvinoratidza kuti testosterone phenylpropionate ndiyo imwe yemishonga inonyanyisa kurwisa kurasikirwa kwehusimbe hwemapfupa.
Kuvandudza bonde kutyaira uye kudya; yakawedzera testosterone mazinga anozogadzirisa yako libido. Kune rimwe divi, kudya kwako kunowedzerwazve. Naizvozvo, izvi zvinoita testosterone phenylpropionate chigadzirwa chakanakisa kune vese vavaki vemuviri uye vanhu vari kunetsekana nepakati pebonde drive. Mukutenderera kwakawanda, kudya kwako kuchagadzirwazve uye kuita kuti zvive nyore kwauri kuti uwane zvinangwa zvaunoda.
Testosterone phenylpropionate mhedzisiro
Sezvimwe chero chero zvinodhaka, testosterone phenylpropionate (1255-49-8) zvakare ine raramo yayo inowanikwa zvakanyanya nevashandisi vanoishandisa zvisizvo. Iwe unofanirwa kugara uchitevera iyo mirayiridzo yemadosi kana iwe uchida kudzikisira mhedzisiro iyi. Nekudaro, nekuda kwekuoma kwemitezo yemunhu, vamwe vanhu vanogona kuona mhedzisiro kunyange mushure mekutora dosage chaiyo, asi vafundisi vanogona kudzora izvo. Mamwe emamwe anowanzoja testosterone phenylpropionate mhedzisiro anosanganisira;
Mushonga unogona kukonzera acne uye rashes mumuviri wako
Inogona kutungamira pakumanikidzwa kwakanyanya
Iwe unogona zvakare kuona hypertrophy yeprostate
Inogona kukonzera mhanza kune vamwe vashandisi
Uye zvakare, kune mamwe madiki madhara maradziro aunogona kuwana, ayo anonyangarika mukati memazuva mashoma. Izvo zvinosanganisira, kumhanya uye kuzvimba zvakatenderedza nzvimbo yejekiseni, asi kana zvikanyanyisa kupfuura zvakatarisirwa, chiremba wako achakubatsira kuwana mushonga wakakwana. Nhau dzakanaka ndedzekuti huwandu hwakawanda hweTestosterone phenylpropionate mhedzisiro inogona kutarisirwa kana iwe ukaudza chiremba wako munguva. Usapfuurire kumwa mushonga kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitenderwa nachiremba. Dzimwe nguva zvinogona kunetsa kudzosera kumashure zvakakomba kana mushonga ukatanga kunonoka.
Mushonga wakakodzera nguva dzose unovimbisa iwe migumisiro yemhando uye panguva yakakodzera. Izvo zvinokurudzirwa testosterone phenylpropionate dosage kubva ku100-200 mg iyo inofanira kutorwa kamwe chete mazuva ese matatu. Kune vashandisi vatsva, zvinokurudzirwa kuti utange nemadosi akadzika mudanho rekutanga saka anogona kuchinjiswa mumatanho anotevera. Mushonga wacho unofanirwa kutumirwa kuburikidza nejekiseni uye intramuscularly. Kazhinji, iwe unofanirwa kutora mushonga kweanenge 6-8 mavhiki. Nekudaro, izvi zvinogona kushandurwa zvinoenderana nekuti muviri wako unoita sei ne testosterone phenylpropionate. Iwe chiremba unogona kukurayira kuti utange neakadzika madhosi kupfuura iyo 100mgs pamazuva e3, mushure mekutarisisa mamiriro ako ekurapa. Vanamai vanoyambiswawo kutora yakaderera testosterone phenylpropionate dosage kuti udzivise kukudziridza hunhu hwechirume.
Kune rimwe divi, vapfumi vanovaka muviri kana vatambi ma200mgs pamazuva 3 ichave iri dofo rakakwana rekuzadzisa zvinangwa zvaunoda. Kuti uwane mibairo iri nani gara uchiperekedza dosage yako nezvekudya kwakakodzera uye nekusevenzesa zvimwe kana uchida kuvaka mhasuru kana kana mumatanho ekucheka. Ichi chinodhaka chinogona kushandiswa pamwe chete nezvimwe anabolic steroid, asi zvakare chinoburitsa mhando dzemhedzisiro painoshandiswa yega. Nezvemabhora akawanda, ungangoda kubaya iyo testosterone phenylpropionate nemamwe maSteroid asi ubatanidze chiremba wako kuti akubatsire iwe kusangana kwakanyanya. Zvakare, yeuka kutevedzera zvese zvayeredzwa mirayiridzo sezvo kuwanda kunogona kutungamira mukukuvara kwakanyanya
5.Testosterone phenylpropionate hafu yehupenyu
Iyo testosterone phenylpropionate ine hupenyu hwekuita hunenge hwe4 kusvika kumazuva XXUMX kana ichinge yaiswa mukati memuviri wako system. Naizvozvo, mushonga unofanirwa kutorwa kamwechete mumazuva matatu ega ega kana kaviri pasvondo kuti uchengete kuwanikwa kwakasimba kweiyo testosterone hormone mumuviri wako. Izvi zvinoita kuti testosterone phenylpropionate yakakwana anabolic steroid yevakawanda vanovaka muviri nekuda kwehupenyu hwayo hurefu. Kune zvakare imwe nguva yakakwana yenzvimbo yako yejekiseni kuti usarape usati watora dosage inotevera. Rangarira, testosterone inowedzerawo kupora kwemasuru, saka uyu mushonga unoshanda sewakanyanya kunaka chero mutambi kana muvaki wemuviri.
6.Testosterone phenylpropionate yekucheka
Testosterone phenylpropionate powder inoita yakanaka yekuwedzera mukucheka macircuit. Iko kutsiga kunowanikwa kweiyi testosterone yehomoni kunowedzera metabolism iyo inopedzisira yabatsira mukuderedza mafuta emuviri. Semunhu anovaka muviri, iwe unofanirwa kupfuura nekucheka kutenderera kuti ubvise mafuta emuviri ayo anogona kukutadzisa iwe kuzadzisa zvinangwa zvako. Mafuta emuviri anoiswa pasi peganda uye anogona kuita kuti zvikuomere kukudziridza mhando uye dzinoonekera dzinoonda tsandanyama. Kwemakore mazhinji ikozvino, zviuru zvevatambi vanga vachishandisa iyo yekucheka uye yakawanda bullets.
Iwe unogona kusanganisa testosterone phenylpropionate nemamwe akanakisa anabolic steroid yekucheka maseketi akadai saWinstrol, Anavar kana trenbolone kuti uwane zvirinani. Zvichienderana nemamiriro ako epazvino uye zvaunoda kuzadzisa, mushonga wako uchakubatsira kuwana yakaringana yekucheka litanho rekubatsira iwe kuwana tsandanyama sezvo iwe uchicheka mafuta emuviri asingadiwe. Kuti uwedzere kutaridzika kwemuviri wako semumhanyi kana kuti bodybuilder, saka unofanirwa kuperekedza iyo Testosterone phenylpropionate yekumesa dosage nekudya kwakakodzera pamwe chete nekushanda
7.Testosterone phenylpropionate yekune bulking
Pano iwe unongova nechinangwa chimwe chete, ndiko kuwana musuru kuwanda mukati menguva pfupi pfupi inogoneka. Vavaki vemuviri vanowanzotanga neakawandisa anotenderera, ayo anoteverwa nekutenderera kutenderera. Vavaki vemuviri vepamberi vanoitikawo kutenderera nguva zhinji kuti vawane uye kuchengetedza mhasuru dzemasumbu. Testosterone phenylpropionate imwe yeanonyanyo shandiswa anabolic steroid mune bulking mizunguko. Nekudaro, vamwe vatambi vanosarudza kuiseta nemimwe zvinodhaka kuti vakurumidze kuitika. Kuwedzeredza mabheji kunosanganisira zvinorema kunoshanda izvo zvinogona kutambanudza tsandanyama dzako kusvika kumhedzisiro, uye kana usina mishonga chaiyo senge testosterone phenylpropionate, unogona kurwadziwa zvakanyanya.
Iyi anabolic steroid inosimudzira kukura kwemutsipa pamwe nekukurumidzira chiitiko chekuporesa kwemashupu. Naizvozvo, kana uchitora yako testosterone phenylpropionate yekune bulking, iwe uchave uine chokwadi chekuwedzera kwemhasuru yemutsipa uye nekukurumidza kupora kwemashure. Mushonga uyu zvakare une refu ester, iyo inoshandura kuhupenyu hurefu hwekuita, saka iwe unenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchipera jekiseni iyo kaviri pasvondo. Saka, kubvumira nzvimbo dzejekiseni kupora usati waenda kune imwe inotevera dosage. Chiremba wako, chiremba wehutano, uye mudzidzisi anofanira kukufambisa muhurongwa hwese hwekuwanda. Gara uine chokwadi chekuti vanoziva zvinangwa zvako zvakanyanya saka paunenge uchitangisa mabhaidhi kana akacheka kutenderera kwakakodzera.
8.Testosterone phenylpropionate inobatsira
Testosterone phenylpropionate inopa dzakasiyana siyana kune vashandisi vanoishandisa nenzira kwayo uye vanotevera mirayiridzo yemyero. Kungofanana chero imwe anabolic steroid, iwe unofanirwa kutevedzera kune yekushandisa mirayiridzo inopihwa ne testosterone phenylpropionate mugadziri uye mushonga wako kuti iwe unakirwe nezvibereko izvi. Mushonga uyu wakaratidza kuve unobatsira mune zvemitambo uye mune zvekurapa ndima Kutarisa akasiyana testosterone phenylpropionate ongororo, iwe uchaona kuti vazhinji vashandisi vanofara uye vari kuratidza kugutsikana kwavo mushure mekushandisa iyi ine simba anabolic steroid. Mamwe eanonyanya kuzivikanwa testosterone phenylpropionate maricho anosanganisira:
Zvinhu Zvose Zvaunoda Kuti Uzive nezvaAnavar (Oxandrolone) yeMuvhuro(Inotanga mune itsva browser tab)
Hupenyu hurefu hunoshanda
Icho chikamu chakanakisa chekushandisa testosterone phenylpropionate (1255-49-8) ndekuti iwe uchazongofanira kutora ako dosages kaviri pasvondo. Izvo zvinoita kuti iyi anabolic steroid ive imwe yeanonyanya kufarirwa madhiraizi nema bodybuilders uye vatambi. Testosterone phenylpropionate inogara ichishanda mumuviri wako system kweanenge 4 kusvika kumazuva e5, iyo inopa nzvimbo dzako jekiseni nguva yakakwana yekuporesa usati watora chinotevera chinodhaka.
Inunura mhedzisiro yemhando mukati menguva pfupi
Testosterone phenylpropionate iri pakati pevashoma-vanoshanda-anabolic steroid pamusika nhasi. Iwe unozongotora uyu mushonga weinopfuura mavhiki e8, uye iwe unozowana zvinangwa zvako kunyangwe uri kuishandisa yekucheka kana kuwandisa magetsi. Kunyangwe chiremba wako achigona kutambanudza mageji zvichienderana nezvinangwa zvako kana kufambira mberi mushure mekutora mushonga, ichine imwe yepfupi dhigidhi dhiviriro munyika yeanabolic steroid.
Inokwidziridza kuita kwako
Semumhanyi kana muvaki wemuviri, unoda simba uye simba remuviri kuti uzadzikise zvinangwa zvebasa rako. Testosterone phenylpropionate inowedzera kuita kwako kwese mukudzidziswa uye kukwikwidza. Kune rimwe divi, uyu mushonga unoita basa rakakosha mukubatsira vatambi uye vavaki vemuviri kuti vadzore maronda emutsipa uye kupera simba mushure mekurovedza muviri kana panguva yemakwikwi. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti iwe unotevedzera ese mirayiridzo yekuraira kuti unakirwe nemhando yemhedzisiro. Pakazosvika nguva yaunopedza testosterone yako phenylpropionate kutenderera, iwe unenge wave wave nesimba rekutora iwe kuburikidza nemakwikwi uye kudzidziswa.
Kurapa kweese testosterone kushomeka maitiro
Munyika yekurapa, vanachiremba vanoshandisa testosterone phenylpropionate kubata varwere vane yakaderera testosterone mhedzisiro yakadai yakaderera bonde drive mukati mevarume, osteoporosis, pakati pezvimwe zvirwere. Akaderera mazinga e testosterone, kunyanya muvarume, anouya nematambudziko akasiyana ehutano ayo testosterone phenylpropionate inoshandiswa kurapa. Semuenzaniso, kana chimiro chechirume chikanonoka kukura, zvino ichi ndicho chimwe chemishonga inonyanya kufarirwa nemishonga.
Kunyangwe ese maanabolic steroid achiuya neakasiyana mhedzisiro, kutora Testosterone phenylpropionate dosages kunozoisa pachena kune mashoma mhedzisiro yakaipa kana iwe ukatora chaizvo. Ndiyo imwe yevashoma anabolic steroid pamusika ine mashoma kwazvo mativi. Yakakura yeTestosterone phenylpropionate mhedzisiro inongoitika kune avo vanoshandisa zvisina kunaka mushonga. Chero bedzi iwe uchiteerera kune ese mirayiridzo yekurayira, iwe wakanaka kuenda, uye iwe uchafadzwa nezvose zvakanaka zve testosterone phenylpropionate.
9.Testosterone phenylpropionate ongororo
Kazhinji, vatengi vazhinji vanotaura zvavanofunga nezve chimwe chigadzirwa kuburikidza nekuongorora uye zviyero. Kungofanana nezvimwe zvigadzirwa zvekurapa, testosterone phenylpropionate yave kugamuchira mhinduro dzakasiyana kubva kune vashandisi vakasiyana. Vazhinji vashandisi vanogutsikana nemhedzisiro dzinounzwa nemushonga uyu zvakanyanya mumitambo yemitambo apo vatambi nevanovaka muviri vanoishandisa kuvabatsira kuzadzisa zvinangwa zvebasa ravo. Kune vatambi, mushonga uyu wabatsira vakawanda kuwana muswe wakawanda panguva yekuwanda uye kutyisa mafuta emuviri mukucheka kutenderera.
Munyika yekurapa, Testosterone phenylpropionate yakagamuchira yakanakisa chiyero uye yakajeka kuongorora. VaMedhia vakataura kubudirira kwe uyu mushonga mukurapa kwakaderera testosterone mhedzisiro inonyanya kuitika munhurume. Sezvambotaurwa pakutanga mune ino nyaya, yakaderera testosterone mazinga anogona kutungamira pakuderera bonde kutyaira, osteoporosis, uye kunonoka mukuvandudzwa kwechirume hunhu sekukwira kwenzwi, ndebvu, pakati pevamwe. Zviuru zvevarwere zvakare zvinorumbidza testosterone phenylpropionate mushure mekurapwa kwakabudirira kwezvirwere zvakasiyana siyana.
Iyo 10 Inonyanyozivikanwa Anabolic Steroids Raw poda mu2019(Inotanga mune itsva browser tab)
Zvakare, vamwe vashandisi vanonyunyuta nekuve neruzivo rwakaipisisa ne testosterone phenylpropionate. Nekudaro, ivo vanofungidzira kusagadzikana kwavo nekunyanyisa kana kushandisa zvisiri izvo zve testosterone phenylpropionate. Miviri yavanhu yakasiyana, uye kwete mushonga wese unoshandira shamwari yako unongozvishandira iwe. Isu tinogara tichiraira vese vashandisi vedu vechigadzirwa kuti vaongororwe nanachiremba vasati vatanga kutora mishonga. Icho chinogara chiri pfungwa yakanaka yekubatanidza chiremba wako mune testosterone phenylpropionate dosage maitiro kune nani chiitiko.
10.Testosterone phenylpropionate inotengeswa
Kune akawanda testosterone phenylpropionate vatengesi vanowanikwa vese online uye muzvitoro zvepanyama zvakatenderedza pasi. Nekudaro, iwe unofanirwa kuve wakangwarira zvakanyanya kana iwe uchifanira kuwana mushonga wepamusoro uyo unokuvimbisa iwe semhedzisiro yemhedzisiro nekupera kwemjikelezo yako. Haisi yega yega testosterone phenylpropionate inogadzira yaunowana online ndeyechokwadi, vamwe vanongova kuti vaite mari, uye ivo havana basa nemhedzisiro yauchawana mushure mekutora dosages yako. Pamberi pako tenga testosterone phenylpropionate, tanga wotsvaga. Ita shuwa iwe unonzwisisa kuti iyo testosterone phenylpropionate mutengesi inoshanda sei usati waita chero kuraira. Verenga wenyaya dzakasiyana revatengi pamwe nekutarisa makambani makenduru.
Isu tiri vanotungamira testosterone phenylpropionate mutengesi uye mugadziri mudunhu. Yedu webhusaiti inoshamwarika-mushe, saka unogona nyore kuita yako yekushandisa uchishandisa yako smartphone, piritsi, kana desktop kubva mukunyaradza kweimba yako kana hofisi. Isu tinogara tichiita chokwadi chekuti tinounza zvese zvigadzirwa mukati menguva pfupi pfupi inokwanisika. Unogona tenga testosterone phenylpropionate poda kuwanda kana kungokwana kuita kwako kwakawanda kana kutema mitsetse. Yeuka, zvisinei kuti iwe unogona nyore kuwana mushonga, usatange kuutora pasina kutungamirirwa nachiremba wako.
Kunze kwezvo, isu tinogara tichiraira vatengi vedu vakavimbika kuti vanzwisise zvinotaurwa nemitemo munyika yavo nezvekutenga kana kuva neanhu anabolic steroid vasati vaita kudaira papuratifomu redu. Hatidi kuisa vatengi vedu mudambudziko nemutemo vanogadzirisa kutenga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Simbisa pamwe nachiremba wako kuti pane chero zvipi zvinorambidzwa kana uchitenga testosterone phenylpropionate kuvaka muviri. Iwe unogona zvakare kubata nesu chero nguva yaunoda kuita odha kana kana uine zvinoshushikana kana mibvunzo nezvezvigadzirwa zvedu. Vamiriri vedu tafura yedare vanogara vakagadzirira kukushandira.
11.Testosterone phenylpropionate vs Testosterone propionate yekuvaka muviri
Iko hakuna mutsauko wakakosha pakati pemishonga miviri kubva pavanoshanda nenzira imwechete. Ivo vese vari anabolic steroid, uye ivo vanogovana hafu yakafanana-yehupenyu hweinenge 4 kusvika kumazuva e5. Unogona kusarudza kutora chero yevaviri uye wotowana mhedzisiro imwe chete. Zvese testosterone phenylpropionate uye testosterone propionate zvinoshandiswa nevanovaka muviri kuvabatsira pakuvaka tsandanyama uye mukucheka mitsetse. Iyo mishonga inovandudza testosterone mahormone mumuviri, izvo zvinoguma nekuvandudza bonde drive, kukura kwemasuru, uye kucheka kwemafuta akawandisa emuviri. Vatambi vazhinji vanoshandisawo chero maviri-echinodhaka kukwidziridza kuita kwavo sezvo vanowedzera simba rose remuviri rinovagonesa kukwikwidza zvine mutsindo.
Testosterone phenylpropionate uye testosterone propionate chete zvakasiyana mumakemikari maumbirwo, asi ivo vanogovana huwandu hwehuhu. Mushonga weairi anabolic steroid unofanirawo kutorwa kaviri pasvondo. Nekudaro, bvunza chiremba wako pane zvinodhaka kuti ushandise pamwe chete nezviviri izvi kuti uwane mhedzisiro. Izvo hazvizoite chero pfungwa kutora zvese izvi Testosterone phenylpropionate uye testosterone propionate mukati mekutenderera kumwechete. Kutora imwe panguva kuchave kunobatsira, asi gara uchivimbisana nachiremba wako. Unogona kutenga ese anabolic steroid pawebsite yedu.
Tretzel, L., Thomas, A., Geyer, H., Gmeiner, G., Forsdahl, G., Pop, V.,… & Thevis, M. (2014). Kushandiswa kwemaoma akaomeswa eropa mune doping kudzora kuongorora kweanabolic steroid esters. Nyaya yemishonga inoshandiswa uye inyanzvi yekuongorora, 96, 21-30.
Bhawani, SA, Sulaiman, O., Hashim, R., & Ibrahim, MN (2010). Thin-safu chromatographic kuongororwa kweasteroids: Ongororo. Trotic Jeniki yeMishonga Kutsvaga, 9(3).
Solimini, R., Rotolo, MC, Mastrobattista, L., Mortali, C., Minutillo, A., Pichini, S.,… & Palmi, Ini (2017). Hepatotoxicity inosanganiswa nekushandiswa zvisiri pamutemo kweanabolic androgenic steroid mukukopa. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 21(1 Suppl), 7-16.